Mark Lawrenson oo saadaal ka bixiyay Kooxda guuleysan karta Kulanka Man United Vs Everton
Home Horyaalka Ingiriiska Mark Lawrenson oo saadaal ka bixiyay Kooxda guuleysan karta Kulanka Man United...
Mark Lawrenson ayaa saadaaliyay in Manchester United ay ku soo laaban doonto 2-1 guul ay ka gaarto Everton kulankooda soo socda ee Premier League ee Old Trafford.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijisay niyad wanaag 9-0 ah oo ay Southampton ku garaacday Old Trafford habeenkii talaadada ka dib goolal ay ka kala heleen Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Anthony Martial iyo Daniel James.
Manchester United ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League ka dib markii ay ku soo laabteen wadada guusha ka dib guushoodii ugu weyneyd ee ay ka gaareen Southampton garoonka Old Trafford.
Kooxda heysata 20ka jeer hanashada horyaalka Ingariiska ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta Premier League iyadoo seddex dhibcood ka dambeysa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.
Dhanka kale, Everton ayaa sideed dhibcood ka hooseysa Manchester United.
Previous articleMichael Owen oo sheegay saadaashiisa Kulamka Aston Villa v Arsenal
Next articleWax ka ogoow xidigaha ku lugyeeshay goolasha ugu badan 2021.